Nyora Nyaya Yangu muZimbabwe
Wako wega Nyora Chinyorwa changu pasina kubhadhara kwakavanzika. Raira muZimbabwe tsika dzakatemwa kubva kuUK uye US vatauri vemo. 24/7 Tsigiro, Mahara Dzokororo uye yemhando yepamusoro inoshanda munguva pfupi
Maitiro Ekunyora Chinyorwa - Maitiro Ekuita Yako Essay Nyore
Wakambobvunzwa here, Sei kunyora chinyorwa changu kwandiri? Vadzidzi vazhinji vanoti 'hongu', uye vatengi vazhinji vanogutsikana nezvabuda. Nekudaro, izvo zvinosiyana zvichienderana nerudzi rwechinyorwa iwe chaunoda kunyora, ingani nguva yaunayo uye izvo zvaunotarisira zviri. Kana iwe uchikwanisa kupedzisa basa mukati menguva yako muganho uye mukati mebhajeti inodiwa, ipapo iwe ungangodaro unakirwe nemaitiro.
Vanyori vakanakisa vanyori vanogona kutarisira zvese zvinodiwa nemudzidzi. Izvi zvinosanganisira kunyora rondedzero inozovabatsira kuti vawane rukudzo kubva kumapurofesa avo, vawane mamakisi akanaka, uye kunyange kutowedzera giredhi ravo. Uine izvi mupfungwa, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti haufanire kuzviita wega.
Nzira yakanakisa yekutanga ndeyekutsvagisa bepa kana rekutsvagisa rondedzero sevhisi. Kune makambani anopa rondedzero sevhisi iyo ichapa zvinyorwa zvekunyora. Kana iwe uchida kuti kambani itore hanya yekunyorera rondedzero yako, pane sarudzo yekushanda nemunyori wega. Nekudaro, kana iwe uchida rubatsiro kunyora chinyorwa, saka zvingave zvakanaka kuenda nebasa.
Pane zvakawanda zvakanakira zvauchasangana nazvo uchishandisa rondedzero sevhisi. Izvo zvinokutendera iwe kuti uwane iwo iwo iwo mhedzisiro iwe wawaizowana dai iwe waive uchiita iwo wega wega. Iwe unozogona kusevha mari nekuti haufanire kubhadhara kuti ushande nemunyori akazvimiririra.
Iwe zvakare uchawana ese mabhenefiti ayo ehunyanzvi rondedzero sevhisi inopa. Nguva zhinji, masevhisi aya achapa rutsigiro rwakafanana rwaungatarisira kugamuchira kana iwe uchihaya munyori akazvimiririra. Ivo vanokupa iwe kuwana kune vanyori vavo, kuti iwe ugone kuwana iyo yakafanana mhando yehunhu basa sezvawaizowana dai iwe waive uchiita iwo wega wega.
Kana iwe ukashandisa rondedzero sevhisi, iwe unozoziva kuti ivo vane ruzivo uye kuti ivo vanozokwanisa kupa zvese rubatsiro rwaunoda kuti upedze basa. Kunyangwe iwe ukasarudza kuenda nemunyori wekuzvimiririra kana kambani inopa rondedzero sevhisi, iwe unenge uine mukana kune vanyori vakasiyana kuti uzokwanisa kuona mashandiro avo ekunyora. usati waita sarudzo yako.
Iwe unozogona kuita zvese kubva pakuronga uye nekugadzira iyo pepa, kusarudza mutoo werondedzero yaunoda kunyora uye kusarudza misoro yaunoda kuvhara, kuzadza bepa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuti iwe une chimiro munzvimbo kuitira kuti rondedzero iite zvine musoro. zvine musoro kwauri.
Kana iwe uchida kunyora rondedzero asi usingazive zvekunyora nezvazvo, iwe uchazoda kuenda nerondedzero sevhisi. Iwe unozogona kuve nehunhu hwemhando iwe hwaunogona kudada nahwo. Iwe unenge uine bhenefiti yekuwana rondedzero iyo inokuwanira iwe mamakisi epamusoro kuitira kuti iwe ugone kuwana mamakisi akanaka kune ako essays.
Kuti unyore rondedzero huru, iwe uchazoda kuve nemamwe matipi ayo achakubatsira iwe kugadzira yako rondedzero. Paunenge uchinge uine ese matipi, iwe unozogona kuronga iri nyore uye inoshanda rondedzero iwe yauchadada kuratidza kune vako mapurofesa kana vamwe.
Izvi zvinokupa mukana kana zvasvika pakunyora kwedzidzo kwaunenge uchiita pane ako koreji zvidzidzo. Iwe unozogona kuve nechokwadi chekuti iwe une ruzivo rwakakodzera kuti usazokanganisa kana zvasvika kune ako essays.
Paunenge uchizoshandisa rondedzero sevhisi, ita shuwa kuti iwe wawana iyo inopa imwe mhando yevimbiso. vimbisa kuti iwe unogona kushandisa kana iwe usina kugutsikana nebasa ravakaita. Nenzira iyi, iwe unozoziva kuti iwe unodzivirirwa kana iwe usiri kufara nemhedzisiro. kubva panguva yawakatora kuti usvike kupedzisa chirongwa chako.
Kune akawanda mabhenefiti auchazonakidzwa nawo uchishandisa yemhando sevhisi kuti ikubatsire iwe kuti uwane kuita kuitwe Chikamu chakanakisa nezvekushandisa rondedzero ndeyekuti iwe unozogona kuwana rwese rubatsiro rwaunoda. kubva kumunyori ane ruzivo.